Boda ny lohan'ingahy Filoha hajaina mamim-bahoaka Rajaonarimampianina - Dinika forum.serasera.org
Boda ny lohan'ingahy Filoha hajaina mamim-bahoaka Rajaonarimampianina
Fitohizan'ny hafatra : Boda ny lohan'ingahy Filoha hajaina mamim-bahoaka Rajaonarimampianina
rabaradaka - 25/10/2017 09:09
Sahiran-tsaina sy very hevitra ny Filoha hajaina mamim-bahoaka Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Mankany ivelany, olon-tsotrano mandray fa tsy mbola noraisin'ny Filoha (Allemagne sy Angletera), eto amintsika misahotaka ny vahoaka noho ny pesta, tsy mandry fahalemana ny tany, manjaka ny kolikoly etsy sy eroa, miakatra izay tsy izy nyvidim-piainana, sy ny sisa.
Ny hany azony atao dia manendry ireo sakaiza akaiky sy akaman-dramatoa Voahangy toa an'ingahy Rabary-Njaka lasa ministra, Rivo Rakotovao lasa Loholona, Harisson Randriarimanana lasa Ministra. Fa hatramin'ny oviana anefa ?
Raha ny aretina efa najo an'ingahy Filoha voafidim-bahoaka sady mamim-bahoaka Hery Rajaonarimampianina dia mety ho lasaadala io ranamana io. Dépression nerveuse na ilay antsoin'ny malagasy hoe kidakadaka kely sy verivery saina no aretina nitsaboana azy teny Anjanamasina efa ho taona maromaro lasa izay. I Ramatoa vadiny koa izay mampandoahalika azy tanteraka dia manao ny ataony koa, mizara entana etsy sy eroa, ny vola voahangona efa amin'ny tonina mihitsy, ny harena mihoam-pampana tsy hay isaina intsony, ireo ilay taranaka avy eny Ankatafatra, ny malaza amin'ny ody gasy sy famosaviana.
BENEM - 25/09/2018 10:28
amiko dia tsotra,efa akaiky zao ny fifidianana dia mahaiza misafidy fa misy 36 izy ireo ka ze hitanao fa mety aminao fidiana.